Wararka - Wararka Shirkada
Ragga S Dharka
Ragga S Hoodie & Sweatshirt
Iyadoo aan lahayn Kab
Dharka Haweenka S
Haweenka S Hoodie & Sweatshirt
Haweenka S T-Shirt
Haweenka S Shirt
Dharka Carruurta S
Si si wanaagsan loo hirgeliyo maareynta caatada ah, loo hagaajiyo xirfadaha hawlgalka, loona ballaariyo fikradaha shaqada, Maarso 15, 2020, soo-saarka shaqaalaha safka hore ayaa loo abaabulay si ay u qabtaan tababar daba-gal ah oo toddobaad soconaya. Nuxurka ugu muhiimsan ee daraasaddan waxaa ka mid ah laba qaybood: awoodda hawlgalka shaqada ee shaqaalaha khadka wax soo saarka iyo awoodda maaraynta goobta. Subaxnimadii 16, hooggaaminta kormeeraha wax soo saarka, wuxuu ku sameeyay booqasho iyo daraasad nidaamsan. Galabtii, wuxuu ku bartay shaqada si waafaqsan amarka shaqada, oo u dhiganta xirfadaha hawlgalka iyo maaraynta goobta ee booska. Inta lagu gudajiro nidaamka barashada, shaqaalaha wershedeena waa la edbiyaa, si xeel dheer wax u bartaan, talo weyddiistaan ​​si khushuuc leh, waxayna muujiyaan niyad wanaagsan.
10-kii Maajo, 2020, waxaa la go'aamiyay in lagu daro dhowr mashiinno dharka lagu daabaco iyo mashiinno lagu riixo. Si si wanaagsan loo daabaco noocyada qaab-tayo sare leh, waxaa sidoo kale lagu dabaqi karaa noocyo kala duwan oo ah dharka dharka. Gudaha ilaa dibedda, waxay siisaa qofka xiran si raaxo leh oo raaxo leh oo xiran. Xagga tayada, raacdada nabadgelyada, aan sii dhammaanayn, dib u soo celinta sare, xakamaynta tayada wanaagsan, iyo si joogto ah u raadinta isbeddellada iyo hal-abuurnimada xagga shaqada, qaababka iyo agabka, si loo abuuro wax soo saar wanaagsan.
Si loo wanaajiyo xirfadaha hawlgalka iyo fikradaha shaqada, Sebtember 14, 2020, u oggolow shaqaalaha khuseeya inay ka qaybgalaan muxaadarooyinka aasaasiga ah ee aqoonta, nuxurka ugu weyn ee barashadu waa geedi socodka hawlgalka dhabta ah ee nuxurka aasaasiga ah iyo fikradaha la xiriira ee aqoonta guud ee gudaha. Tartan aqooneedka dhexdooda ayaa ka dhigaya aqoontiisa warshad xirfadeed mid adag oo qoto dheer. Jawi dabacsan oo qallafsan, shaqaaluhu waxay lahaan doonaan faham wanaagsan, hawlgalka dhabta ah ee galabtana wuxuu ka dhigayaa mid tayo badan oo hufan.
Waqtiga boostada: Nofeembar-18-2020
89 Qessen Road, Beerta Warshadaha ee Maal-gashiga Shisheeye, Degmada Xinjian, Nanchang City, Gobolka Jiangxi, Shiinaha